Suudaan Mollaa Asgadoomii fi woraana isaa dabarsitee Itoophiyatti laatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Suudaan Mollaa Asgadoomii fi woraana isaa dabarsitee Itoophiyatti laatte
Generaal Mollaa Asgadoomii fi woraana isaa mootummaan Suudaan dabarsee humna nagaa Itoophiyaatti laatuun gabaafame. Suudaan Mollaafi humna isaa kan gara Itoophiyaa deebifte guyyaa kaleessaati. Tankaarfii mootummaa Suudaan kana mootummaan Itoophiyaa faarseera; injifannoo guddaa jechuudhaanis dhaadhesseera.
Mollaa Asgadoomiifi humni woraana isaa naannoo 800 titti tilmaamamu Sanbata darbe ture biyya yeroo dheeraadhaaf keessa socho’aa ture gadi lakkisee gara Suudaan magaalaa Hamdaa’ititti kan baqate. Gara Suudaanitti baqachuuf kan isaan dirqe woraanni humnoota mootummaa Eertiraa irraa itti banamuu isaatiif ta’uunis gabaafamee ture.
Huni Mollaa Asgadoom akkuma Suudaan seenaniin hidhannoo akka hiikkatu taasifamee ture.
Mollaa Asgadoom mataa Worraaqsa Dimokraatawaa Ummata Tigraay ta’uun isaa nibeekama.
Previous articleSagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf
Next articleMootummaa ce’umsaa Burkiinaa Faasoo irratti fonqolchaan geggeeffame